ကုလားပဲနှပ် ( Indian Yellow Split Pea Curry) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Sunday, November 24, 2013 Taunzalat
ကုလားပဲ........................၂ ခွက်( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ကြက်သွန်နီ....................၁ လုံး ( နုပ်နုပ်စဉ်း)
ဇီယာမှုန်. .......................၁ ဇွန်း( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ထောပတ်........................၂ ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း)
အုန်းနိူ.( သို.) နွားနိူ............၁ ခွက် (လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ကုလားပဲတွေကို မချက်ခင်အနည်းဆုံး(၅) နာရီလောက်ကြိုတင်ရေစိမ်ထား
ပြားရိုက်ထည့်ကာအဖုံးပိတ်ပြီးပြုတ်ပါ။( ပဲပြုတ်စဉ်ဆားမထည့်ရ။ ဆားထည့်ပါက..ကုလားပဲနှူးအိဖို.ခက်ခဲတတ်ပါသည်)
ကုလားပဲနှူးအိခါနီးမှာ အုန်းနိူ.(သို.) နွားနိူ.ကိုထည့်ပေါင်းပြီးရေခမ်းအောင်ပြန်ပြုတ်ပေးပါ။ ထိုမှသာကုလား
ပဲများက နွားနိူ.( သို.) အုန်းနိူ.အရသာကိုစုပ်ယူပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရသာ
မှတ်ချက်။ ။ ရေလုံးဝခမ်းချိန်မှာမီးဖိုပေါ်မှချလျှင်စားသုံးသည့်အချိန်ကုလား